Ethereum အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter Ethereum ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလဲလှယ်စျေးကွက်အပေါ်စျေးနှုန်းယနေ့။
Ethereum စျေးနှုန်း မြန်မာကျပ်ငွေ (MMK)
1 Ethereum (ETH) တန်းတူ 218 955.29 မြန်မာကျပ်ငွေ (MMK)
1 မြန်မာကျပ်ငွေ (MMK) တန်းတူ 4.57 * 10-6 Ethereum (ETH)
ပြောင်းပေးတဲ့ Ethereum တွင် မြန်မာကျပ်ငွေ။ ယနေ့တွင် Ethereum မှုနှုန်း သို့ မြန်မာကျပ်ငွေ တွင် 13/12/2019.
Ethereum စျေးနှုန်း ဒေါ်လာ (USD)
1 Ethereum (ETH) တန်းတူ 145.12 ဒေါ်လာ (USD)
1 ဒေါ်လာစျေး (USD) တန်းတူ 0.006891 Ethereum (ETH)
ပြောင်းပေးတဲ့ Ethereum ဒေါ်လာပါ။ ယနေ့တွင် Ethereum မှာတဒေါ်လာနှုန်းကို 13/12/2019.
Ethereum စျေးနှုန်းကိုလွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဈေးကွက်ရှိအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီမှတွက်ချက်သည်။ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအရောင်းအ ၀ ယ်များတွင်ချက်ချင်းစျေးနှုန်းများကိုသင်္ချာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကသင့်အားယနေ့ပျမ်းမျှ Ethereum စျေးနှုန်းကိုတွက်ချက်ရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ 13/12/2019 ။ Ethereum အွန်လိုင်းစျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုရဲ့ ဦး တည်ချက်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Ethereum မနက်ဖြန်အတွက်နှုန်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ Ethereum ယနေ့စျေးနှုန်း 13/12/2019 အွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုကအခမဲ့ဖြစ်သည်။
Ethereum ဒီနေ့အပြန်အလှန်အားဖြင့် - ကုန်သွယ်မှုအားလုံး Ethereum ဖလှယ်မှုအားလုံးမှဇယားတစ်ခုတွင်အကျဉ်းချုံးထားသည်။ ယနေ့လဲလှယ်မှု၏ Ethereum ဝန်ဆောင်မှုကဏ္တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရောင်းရဆုံးနှင့်ဝယ်ယူမှု Ethereum နှုန်းထားများကိုပြသသည်။ လေလံပွဲတွင်မည်သည့် အိမ် အတွဲပါ ၀ င်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်။ ဒီအရောင်းအ ၀ ယ်တွေလုပ်တဲ့နေရာလဲလှယ်ရေးနဲ့အချိတ်အဆက်ပေးတယ်။ Ethereum မြန်မာကျပ်ငွေ - Ethereum ပျမ်းမျှစျေးနှုန်း မြန်မာကျပ်ငွေ ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် မြန်မာကျပ်ငွေ s ရှိ Ethereum စျေးနှုန်းကိုဒီလိုမျိုး algorithm အရတွက်ချက်သည်။ ပျမ်းမျှကုန်သွယ်မှုအရောင်းအ ၀ ယ် Ethereum သည်ယနေ့ဒေါ်လာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ယနေ့ဗဟိုဘဏ်၏ဒေါ်လာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် မြန်မာကျပ်ငွေ ၏ဒေါ်လာငွေလဲလှယ်နှုန်းဖြင့်မြှောက်ထားသည်။
အားလုံး ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး စျေးကွက်ကနေအကောင်းဆုံး Ethereum ငွေလဲနှုန်းယနေ့။ ယနေ့ Ethereum ဝယ်ဖို့သို့မဟုတ်ရောင်းဖို့အကောင်းဆုံးစျေးကွက်။
သင်ဤအထူးသဖြင့်စျေးကွက်အပေါ်ကိုရှာဖွေနိုင်သည့် Ethereum ရောင်းအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း။
သင်ဤအထူးသဖြင့်စျေးကွက်အပေါ်ကိုရှာဖွေနိုင်သည့် Ethereum ဝယ်သည်အတွက်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း။
ETH/USDT $ 184.55 $ 138.939895915 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် Tether
ETH/BTC $ 192.826261533 $ 137.94 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် Bitcoin
ETH/USDC $ 147.36 $ 143.91 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် USD//Coin
ETH/TUSD $ 154.73 $ 141.92 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် True USD
ETH/PAX $ 147.64 $ 145.05 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် Paxos Standard Token
ETH/BUSD $ 145.73 $ 145.73 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် BUSD
ETH/BRL $ 158.40 $ 145.89 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် ဘရာဇီးကိုမှန်ကန်
ETH/USD $ 186.00 $ 141.66 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် အမေရိကန်တဒေါ်လာ
ETH/EUR $ 155.83 $ 142.28 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် ယူရို
ETH/JPY $ 145.86 $ 144.57 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် ဂျပန်ယန်းငွေ
ETH/GBP $ 152.33 $ 144.30 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် ပေါင်စတာလင်ပေါင်
ETH/UAH $ 145.90 $ 139.78 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် hryvnia
ETH/RUB $ 150.89 $ 145.42 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် ရုရှားရူဘယ်
ETH/CNY $ 169.423236255 $ 148.25 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် ယွမ်
ETH/KRW $ 149.92 $ 141.89 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် တောင်ကိုရီးယားဝမ်
ETH/IDR $ 145.85 $ 145.72 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် အင်ဒိုနီးရှားရူပီယာ
ETH/EURS $ 149.79 $ 145.12 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် STASIS EURS
ETH/TRY $ 184.35 $ 144.60 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် နယူးတူရကီလိုင်ရာ
ETH/PEN $ 149.57 $ 149.57 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် ပီရူး Nuevo sol
ETH/XLM $ 145.62 $ 145.25 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် Stellar Lumens
ETH/PLN $ 147.73 $ 147.43 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် ပိုလနျ zloty
ETH/CHF $ 147.62 $ 146.16 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် ဆွစ်ဖရန်
ETH/USDK $ 145.40 $ 144.92 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် USDK
ETH/HUSD $ 145.91 $ 145.91 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် HUSD
ETH/AUD $ 155.66 $ 144.30 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် သြစတေးလျဒေါ်လာ
ETH/LTC $ 152.14 $ 138.910759324 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် Litecoin
ETH/INR $ 155.67 $ 155.67 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် အိန္ဒိယရူပီး
ETH/DAI $ 145.88 $ 144.93 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် Dai
ETH/EOSDT $ 142.99 $ 142.99 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် EOSDT
ETH/SGD $ 144.71 $ 144.57 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် စင်္ကာပူဒေါ်လာ
ETH/CAD $ 183.68 $ 143.70 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် ကနေဒါဒေါ်လာ
ETH/HKD $ 144.73 $ 142.24 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ
ETH/1SG $ 144.94 $ 144.94 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် 1SG
ETH/USDQ $ 145.26 $ 145.26 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် USDQ
ETH/ZAR $ 155.83 $ 153.85 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် Rand
ETH/WAVES $ 149.25 $ 145.11 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် Waves
ETH/ARS $ 166.22 $ 166.22 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် အာဂျင်တီးနားပီဆို
ETH/EURO $ 144.43 $ 144.43 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် EURO
ETH/BITCNY $ 145.41 $ 145.41 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် bitCNY
ETH/THB $ 145.56 $ 144.16 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် ထိုင်းဘတ်ငွေ
ETH/MXN $ 144.22 $ 144.22 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် မက္ကဆီကန်ပီဆို
ETH/CKUSD $ 139.36 $ 139.36 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် CK USD
ETH/NZD $ 145.23 $ 145.23 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ
ETH/BCH $ 145.27 $ 145.27 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် Bitcoin Cash
ETH/DOGE $ 149.05 $ 149.05 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် Dogecoin
ETH/RUR $ 146.20 $ 146.20 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် RUR
ETH/KT $ 143.49 $ 143.49 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် KT
ETH/BTS $ 137.82 $ 137.82 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် BitShares
ETH/XRP $ 150.04 $ 143.30 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် XRP
ETH/CZK $ 144.94 $ 144.94 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် ခကျြခကျြ koruna
ETH/ICX $ 143.13 $ 143.13 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် ICON
ETH/QTUM $ 145.08 $ 145.08 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် Qtum
ETH/TWD $ 145.87 $ 145.87 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် ထိုင်ဝမ်အသစ်ဒေါ်လာစျေး
ETH/VND $ 144.91 $ 144.91 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် Vietnamesse ဒေါင်
ETH/VNDC $ 145.88 $ 145.88 ရန်အကောင်းဆုံး Ethereum လဲလှယ် VNDC
Ethereum ဒေါ်လာ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - ပျမ်းမျှစျေးနှုန်း Ethereum ကိုဒေါ်လာနဲ့တွက်ချက်ပြီးဒီနေ့အတွက်ဒီအစီအစဉ်အတွက်ဒေါ်လာ။ Ethereum နှင့်ဒေါ်လာစျေးရောင်းဝယ်မှုသည်အခြားငွေကြေးများနှင့်နှိုင်းစာလျှင်ပိုမိုကြီးမားသည်။ Ethereum စျေးနှုန်း 13/12/2019 - Ethereum Ethereum ၏လက်ရှိစျေးနှုန်းဖြင့်မြှောက်။ Ethereum Ethereum စျေးနှုန်းနဲ့မတူတာကကုန်ကျစရိတ်ဟာလဲလှယ်ငွေပမာဏနဲ့မတူပါဘူး။
Ethereum တန်ဖိုး မြန်မာကျပ်ငွေ - စည်းမျဉ်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဒီပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်သည် Ethereum ကိုထုတ်ဖော်ပြထားတဲ့ဒေါ်လာတန်ဖိုး။ မြန်မာကျပ်ငွေ ငွေကြေး။ Ethereum to မြန်မာကျပ်ငွေ ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ် algorithm ကတော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်။ သူသည်ယနေ့အရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံးအတွက်လဲလှယ်ရောင်းဝယ်မှုအားလုံးကိုရွေးချယ်သည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်ဒေါ်လာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လိုသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ၏ငွေလဲနှုန်းကိုတွက်ချက်သည်။ ထို့နောက်၎င်းနှုန်းကို မြန်မာကျပ်ငွေ သို့ကူးပြောင်းရန်သာကျန်ရှိသည်။ ဤလမ်းညွှန်တွင်တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်မှုဇယားများလည်းပါ ၀ င်သည်။ တိုက်ရိုက်အရောင်းအ ၀ ယ်များတွင်သင်သည် Ethereum မှ မြန်မာကျပ်ငွေ ၏တန်ဖိုးကိုသိနိုင်သည့်တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်မှုဇယားများပါဝင်သည်။ သင်၏ကန်ထရိုက်စာချုပ်သည်ပျမ်းမျှပမာဏနှင့်ကွဲပြားလျှင်များသောအားဖြင့် Ethereum ၏ပျမ်းမျှငွေလဲလှယ်နှုန်းနှင့်ကွာခြားနိုင်သည်။
Ethereum ဂဏန်းတွက်စက်အွန်လိုင်း - ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းအတွက်ဝန်ဆောင်မှု Ethereum ကိုလက်ရှိနှုန်းဖြင့်အခြားငွေကြေးဖြင့်ထည့်သွင်းပါ Ethereum အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော website service ကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး calculator ဟုခေါ်သည်။ တစ်ခုနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးပြောင်းလဲခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်၎င်းဖြစ်သည် Ethereum မှ မြန်မာကျပ်ငွေ ဂဏန်းတွက်စက်၊ ငွေပမာဏကိုပြသည် မြန်မာကျပ်ငွေ အချို့သောပမာဏကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်လိုအပ်သည် Ethereum ဒီ site မှာအခမဲ့အွန်လိုင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး converter service ရှိတယ်။